राजधानीमा एनआइसीको बित्तीय सचेतना र्याली !
ARCHIVE, CORPORATE » राजधानीमा एनआइसीको बित्तीय सचेतना र्याली !
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंकले भदौ ३१ गते शनिवारका दिन सर्वसाधारणमा वित्तिय सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एक बृहत् वित्तिय सचेतना र्यालीको आयोजना गरेको छ ।
बैंकको कमलादी शाखाबाट सुरु भएको सो र्याली काठमाण्डौंको विभिन्न मुख्य स्थानहरुको परिक्रमा गर्दै पुन: कमलादी शाखामा पुगी समापन भएको थियो । र्यालीमा बैंकका ६०० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो ।
बैंकले हाल ६ लाख भन्दा बढी निक्षेप ग्राहक, २८ हजारभन्दा बढी कर्जा ग्राहक ३ लाख ३० हजार भन्दा बढी डिजिटल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुलाई देशभर रहेका आफ्ना १२८ शाखा एवं विस्तारित काउन्टर मार्फत् उच्चस्तरिय र ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।